Yenza imodeli yedijithali ye-TIN ngeBentley Site -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Yakha imodeli ye-digital ye-TIN ngeBentley Site
Yakha imodeli ye-digital ye-TIN ngeBentley Site
I-Bentley Site yenye yezixhobo ngaphakathi kwiphakethi ebizwa ngokuba yiBentley Civil (Geopak). Siza kubona kule meko ukuba uyenza njani imodeli yendawo esekwe kwimephu esele ikhona ye-3D.
Ndisebenzisa iifayile ezintathu-ntetho, equle imodeli yesithathu apho into nganye 3Dface, yiyiphi i-Microstation ebiza imilo.
2 Ulawulo lweProjekthi .gsf
Iifayile .gsf (ifayile yesiza seGeopak) igcina ulwazi lwezicelo ezahlukeneyo zeGeopak kwaye luhlobo lwedatha yokubini. Ukwenza enye, yenza oku kulandelayo:
Indawo moedeler> Iprojekthi yeWizzard> Yenza iprojekthi entsha> Elandelayo> yinike igama "san ignacio ground.gsf"> Okulandelayo.
Emva koko ibha yeprojekthi ibonakala, sikhetha:
Imodeli yesiza> Iprojekthi yeWizzard> Vula iprojekthi esele ikhona> Khangela.
Kwaye sibheke iphrojekthi esanda kuqalwa kwaye ukhethe vula.
3 Gcina izinto kwi .gsf
Ngoku sifuna ukuba i-.gsf iqulethe ulwazi lwemephu, kuba kufuneka simxelele uhlobo luni lwezinto abazenzayo.
Yenza umzekelo omtsha
New umzekelo wesayithi > sinika igama kwimodeli "dtm san ignacio"> ok.
Imodeli yesiza> iprojekthi yewizard> Ngenisa imifanekiso ye-3D
Kwiphaneli ebonakalayo, sibela igama lento, kulo mzekelo "dtm", Sichaza iimpawu zokunyamezela kunye nohlobo lwezinto, kulo mzekelo ku ngabikho. Isenokukhethwa umgca xa kunemigca yokujikeleza, ukuphula imigca, imida, Njl
Emva koko kunye neqhosha khetha izinto, Sikhetha zonke izinto kumbono. Ukuze singabinangxaki ekukhetheni, sisebenzisa ibhloko ukhetho kwaye senze ibhokisi ejikeleze zonke izinto.
Sicinezela iqhosha sicelo, kwaye kwipaneli engezantsi umlinganisi wezinto uvela ekuhlaleni, ngelixa kungena kule projekthi.
Kuze kube ngoku, i-Geopak iyaqonda ukuba zonke ezi zinto ziyingcongolo yezinto ezidibeneyo.
4 Thumela kwi-TIN
Ngoku into esiyifunayo kukuba izinto eziyiliweyo zinokukhutshelwa ngaphandle njengemodeli yedijithali (TIN), kuba oku sikwenza:
Export Model / Object
Kwaye kwipaneli sikhetha ukuba into esiya kuyikhuphela iya kuba yinto kuphela, kunye nohlobo; inokuba yifayile yokubini okanye yeLand XML. Sikhetha uhlobo TIN Ifayile.
Sikwachaza igama lefayile kwaye kunokwenzeka ukumisela iseti ethe nkqo. Njengoko siza kuthumela zonke izinto esingazikhethi umda.
Kwaye banayo, yinto yokukhetha indlela ofuna ukuyijonga ngayo i-TIN; kunye nemigangatho yamanqanaba, i-quantum, imbono okanye i-vector, esiza kubona kwelinye iposi.
... unyaka omkhulu